GUDOOMIYE CIRO WAXA U SI TOOSA ULA DAGAALAMAYA MIDNIMADA SOMALILAND , WAXA UU SHIRKA WADANI SOO DHEXDHIGEY KURSI UU KU MAGACAABAY MAAMUL GOBOLEEDKA KHAATUMO | Gabiley News Online
GUDOOMIYE CIRO WAXA U SI TOOSA ULA DAGAALAMAYA MIDNIMADA SOMALILAND , WAXA UU SHIRKA WADANI SOO DHEXDHIGEY KURSI UU KU MAGACAABAY MAAMUL GOBOLEEDKA KHAATUMO
September 30, 2019 - Written by admin
Suaasha is way diinta mudan waxay tahay , waa maxay danta ugu jirta gudoomiye ciro in uu shicibka naf iyo maalba ku waayay dib u soo celinta xoriyadoodii ka luntay lixdankii, uu u muujiyo in aanay isaga qiimo buuran ugu fadhiyin.Su aasha jawaabteeda inta aynaan gudo galin bal aynu dib u eegno , waxa uu gudoomiye Ciro ku darsaday dhismaha Somaliland.
1990 bishii April anigoo qaxootiya Ayaan waxaan tagay mosko , midawgii soofiyati. Waxaa la ii sheegay in ay jiraan niman mukhalasiina oo safaarada somaliya ka shaqeeya , oo kuu raadinaaya guri aad mosko ka dagto, iyo fiiso aad ku tagto wadamada reer galbeedka ah. Nimankii safaarada ka shaqaynayay waan la kulmay, way ila gorgortameen, waxaanay goor galab ah I geyeen guri ku yaala geeska mosko oo sadex makhsina . Gurigii markaan galay waxaan kula kulmay konton qof oo sadexdaa makhsin dhamaantood laga kireeyey, oo qofkastaaba uu ku dagaalamayo meel uu dhinaca dhigo.
Nimankii shaqaalaha ka ahaa safaarada somaliya ee mosko waxa ay dad badan ka urursadeen lacag aad u badan, oo ay gurigaa ku ururiyeen ,fiisaha yurubta galbeedna ugu balan qaadeen, hase yeeshee dadkaasi oo isugu jiray xaasas caruur wata iyo dad caadiyaba lacagtoodii dib umay arag.
Waxyaabaha aynu gudoomiye ciro ku xasuusanayno waxaa ka mida 12 sano ee uu barlamaanka gudoomiyaha ka ahaa. Mudadaas oo uu baarlamanku ka baxi waayay khilaaf , iska daa sharci uu sameeyo. Waxa aynu xusuusanahay inta goor ee xaaji cabdi waraabe allah ha u naxariiste iyo haldoorkii Somaliland dhexdhexaadinta ka galeen.
Gunaanadkii, sababta hadalkaa ka yeedhsiisay xushmayn la aanta ah maalintii la soo noqoshada qaranimada somaliland , iyo maanta oo uu shirkii xisbiga wadani ku lahaa burco uu soo dhexdhigay kursi uu ku qoray maamul goboleedka khaatumo , waxay tahay : Ciro oo aaminsan tartanka jagada madaxwaynenimo in uu ku heli karo oo kaliya codka uu ka helo qabiilkiisa ,iyo Codka dadka aan taageersanayn madaxbanaanida somaliland, oo uu u muujiyo ciro ahaan in isagu aanu Somaliland taageersanayn. Hadaba Ciro arinka uu maanta kawado Somaliland iyo kii uu kawaday mosko 1990 ,way isku egyahiin .waxana ku waajiba Dawlada , labada baarlamaan in la soo saaro xeerka sharuudaha uu buuxinaayo ninka Somaliland madaxwayne ka noqonaya, iyo in siyaasada laga mamnuuco shakhsigii xamar ka soo shaqeeyey.